Kubata Hove & Turusi Bhokisi Vagadziri & Vatengesi - China Kubata Hove & Turusi Bhokisi Factory
Purple Series Outdoor Fishing Bhokisi
Romantic yepepuru hove bhokisi rine chisimbiso chinoshanda, kuvhunduka uye kudonha kuramba, chinobvisika baffle.Inogona kushandiswa kuchengetedza giya rekuredza, senge chirauro, tambo yekuredza, nezvimwe, pamwe nezvimwe zvishandiso uye zvishongedzo, zvine mabasa akasiyana.
Item nhamba: BX011
Tsanangudzo: 198 * 145 * 40mm
Capacity: 18 Compartments
Ruvara: Transparent / purple
Kushandiswa: Kuredza kunze
Kubata hove bhokisi rine Adjustable dividers
Kubata hove kwakasiyana bhokisi rekushandisa, mubatsiri wako akanaka wekuredza kunze.Chengetedza zvishongedzo zvako zvekuredza, zviredzo, zviredzo, nezvimwewo. Iyo dhizaini iri nyore uye iri nyore kutakura.
Bhokisi rehove rekunze, bhokisi rekuchengetera, bhokisi rechirauro, iri ibhokisi rakajeka rekubata hove rine Adjustable dividers ane akawanda mabasa.
Custom Hove Plastic Bait Box
Bhokisi rekushandisa rekuchengetedza hove rine maitiro ekugadzirisa.Iwe unogona kugadzirisa chero pateni yaunoda pamusoro kuti uratidze yako brand hunhu.
Orenji neWhite Kudhinda Hove Bhokisi Rokukwezva Bhokisi
Orenji uye chena mutsauko weruvara unoratidza zvizere kuravira kwemafashoni.Kudhinda kuri pamusoro kunoratidza hunhu hwako zvakanyanya.Ehe, iwe unogona kudhinda yako brand logo kuratidza yako brand kukosha zvakanyanya.Bhokisi rakasimba, rinoshanda uye rinotaridzika rekubata hove.Iyi ndiyo sarudzo yako yakanaka.Chitarisiko chakanaka uye dhizaini yemukati ine hungwaru, yakakodzera kune dzakasiyana siyana dzekubata hove.
Bhokisi rakasviba nechena rekubata Hove rine Adjustable Dividers
Bhokisi rekubata hove rakasviba uye chena.Chifukidzo chepamusoro dema, muviri mukuru wakajeka chena, unogona kuona kugoverwa kwemukati uye nyore kuwana zvinhu.Iyo compartment dhizaini inogona kugadzirisa zvinhu zvehukuru hwakasiyana.Dhizaini yakapusa, isina kuomesesa switch, iri nyore kushandisa.Kiyi yakasimba uye haitani kukuvara nyore.
Hove Plastic Transparent Bhokisi Lure Box Black
Matatu matema akatevedzana ehove mabhokisi.Transparent + dema, dema + pachena, uye ese matema.Iwe unogona kusarudza zvakasununguka maererano nezvido zvako.Iyo yemukati yakakamurwa kuita dhizaini dhizaini, iyo yekuparadzanisa inogona kuparadzaniswa uye kufambiswa, uye mukati unogona kuunganidzwa kune saizi yaunoda, yemahara uye inoshanduka, uye iri nyore kushandisa.
Lake Blue Outdoor Hove Bhokisi
Iyo nyowani yebhuruu hove bhokisi inowanikwa yakazara yebhuruu uye translucent kune yako sarudzo, uye mushandisi-ane hushamwari dhizaini iri nyore kutora uye kutakura.Saizi diki, kugona kukuru, kushandiswa kwenzvimbo yakakwirira.Zvakatipoteredza zvine hushamwari epurasitiki zvinhu, translucent bhokisi muviri, mukati chengetedzo zvinhu zvakajeka pakungotarisa.
Plastic Clear Tackle Bhokisi
Bhokisi repurasitiki rakajeka rekubata hove, rakagadzirwa nezvinhu zvakatipoteredza zvisina BPA, rine makamuri gumi nemasere, anogona kugadziriswa zvakasununguka kuti agare maturusi ako ehukuru hwakasiyana.Micheto yakatenderedzwa haikuvadzi maoko ako.Zviri nyore kutakura uye zvine simba rekugara.Ndiyo mubatsiri wako wakakwana wekubata hove kunze.
Kubata Hove Kukwevera Tool Bhokisi
Iro rakakwidziridzwa rakajeka rekuchengetera bhokisi rine hurefu hunosvika masendimita gumi, uye nzvimbo yekuchengetera ine simba rakawanda.Iyo yakajeka dhizaini inobvumidza iwe kuti uone zvakajeka zviri mukati uye zviri nyore kudzoreredza.Yakagadzirwa neBPA - yemahara epurasitiki zvinhu, zvakatipoteredza zvine hushamwari uye inogara.